Ergo ka socota Xeraale, Huurshe iyo dhaqanka Cadaado oo heshiis gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wafdigan oo isugu jira Nabadoono iyo madax dhaqameed oo ka socda deegaanada Xeraale iyo Huurshe oo maalmahan kulamo magaalada Cadaado kula lahaa dhaqanka deegaanka ayaa maanta shirkooda ka soo saaray qodobo dhawr ah oo ay isla gaareen.
Kulan kooban oo lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Ximan iyo Xeeb ayaa lagu soo bandhigay heshiiskaas oo uu saxaafadda u aqriyay afhayeenka Ximan iyo Xeeb Carays Maxamed Xaaji.
Qodobada heshiiska ayaa waxaa ugu waa waynaa in labada dhinac iska kaashadaan Amniga, dib u heshiisiinta iyo ganacsiga, lana sii joogteeyo wadatashiga iyo xiriirka ay leeyihiin.
Cabdulle Macalin Ibraahim oo ka mid ahaa madax dhaqameedka Xeraale ayaa sheegay in heshiiskan micno wayn u leeyahay bulshada gobolka.
Ugu dambayn madaxwaynaha Ximan iyo Xeeb C/llahi Cali Maxamed ayaa sheegay in dhinacooda ay fulinayaan qodobada lagu heshiiyay.
Nabadoonada labada dhinac ayaa kol hore kulamo nuucan ah ku yeeshay deegaanka Xeraale, iyadoo kulankan maanta Cadaado ka dhacay uu arrimahaas gabangabo u ahaa.